(၁၃) နှစ်ငယ်တဲ့ ချစ်သူမောင်လေးနဲ့ လမ်းခွဲပြတ်ဆဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောလာတဲ့ ပိုပို - Cele Connections
အဆိုတော် ပိုပိုကတော့ အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ ခံစားချက်အပြည့်ပါတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို သီဆိုတတ်သူလေးတစ်ယောက်ပါပဲ။ ပိုပိုကတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက သီချင်းဆိုတာကို ဝါသနာပါခဲ့သူဖြစ်ပြီး အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားမှုကြောင့် လက်ရှိမှာတော့ ပိုပိုက နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ် ဂီတလောကမှာ အောင်မြင်နေလျက်ရှိပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်အာရုံစိုက်ခံရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ဟန်ဆောင်မှုမရှိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေထိုင်တတ်တဲ့ ပိုပိုက သူမရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ ပက်သတ်ပြီးလည်း အရိုးသားဆုံးချပြထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပိုပိုက သူ့ရဲ့ (၁၃) နှစ်ငယ်တဲ့ ချစ်သူမောင်လေးနဲ့ လမ်းခွဲပြတ်ဆဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကို “I’m Single Now. ဘဝမှာ အကြိမ်ကြိမ် ခွဲခွာခြင်းတွေ ကြုံခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီတစ်ခါ အရင့်ကျက်ဆုံးပါပဲ။ ကျွန်မ ငှက်တစ်ကောင်ပါ။ အချိန်တန်ရင် တစ်ကောင်တည်းပျံသန်းရတာပါပဲ။ ညတွေမှာ တစ်ယောက်တည်းနေရတာ ပိုကြိုက်တယ်” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် Story မှာ ရင်ဖွင့်ပြောပြလာပါတယ်။
ပိုပိုရဲ့ ချစ်သူကောင်လေးကတော့ ပိုပိုထက် အသက် (၁၃) နှစ်ငယ်ပြီး ပိုပိုကိုယ်တိုင်ကလည်း အင်တာဗျူးဗီဒီယိုတွေမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မိတ်ဆက်ပေးထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့ဆုံကြုံကွဲခြင်းက လူ့သဘာဝမို့ ပိုပိုတစ်ယောက် အနုပညာအလုပ်တွေမှာ ပိုမိုအချိန်ပေးဖြစ်တော့မယ်လို့ အကောင်းဘက်ကနေ တွေးတောရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: ဝတ် ရည် မိုး ‘s fb
(၁၃) နှဈငယျတဲ့ ခဈြသူမောငျလေးနဲ့ လမျးခှဲပွတျဆဲလိုကျပွီဖွဈကွောငျး ပွောလာတဲ့ ပိုပို
အဆိုတျော ပိုပိုကတော့ အသံပါဝါအားကောငျးကောငျးနဲ့ ခံစားခကျြအပွညျ့ပါတဲ့ သီခငျြးလေးတှကေို သီဆိုတတျသူလေးတဈယောကျပါပဲ။ ပိုပိုကတော့ ဆယျကြျောသကျအရှယျကတညျးက သီခငျြးဆိုတာကို ဝါသနာပါခဲ့သူဖွဈပွီး အနုပညာလောကထဲကို ဝငျရောကျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ မဆုတျမနဈကွိုးစားမှုကွောငျ့ လကျရှိမှာတော့ ပိုပိုက နိုငျငံကြျော အဆိုတျောတဈယောကျအဖွဈ ဂီတလောကမှာ အောငျမွငျနလေကျြရှိပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျအာရုံစိုကျခံရတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပမေယျ့ ဟနျဆောငျမှုမရှိ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနထေိုငျတတျတဲ့ ပိုပိုက သူမရဲ့ အခဈြရေးနဲ့ ပကျသတျပွီးလညျး အရိုးသားဆုံးခပြွထားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီတဈခါမှာတော့ ပိုပိုက သူ့ရဲ့ (၁၃) နှဈငယျတဲ့ ခဈြသူမောငျလေးနဲ့ လမျးခှဲပွတျဆဲလိုကျပွီဖွဈကွောငျးကို “I’m Single Now. ဘဝမှာ အကွိမျကွိမျ ခှဲခှာခွငျးတှေ ကွုံခဲ့ပွီးပွီ။ ဒီတဈခါ အရငျ့ကကျြဆုံးပါပဲ။ ကြှနျမ ငှကျတဈကောငျပါ။ အခြိနျတနျရငျ တဈကောငျတညျးပြံသနျးရတာပါပဲ။ ညတှမှော တဈယောကျတညျးနရေတာ ပိုကွိုကျတယျ” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျ Story မှာ ရငျဖှငျ့ပွောပွလာပါတယျ။
ပိုပိုရဲ့ ခဈြသူကောငျလေးကတော့ ပိုပိုထကျ အသကျ (၁၃) နှဈငယျပွီး ပိုပိုကိုယျတိုငျကလညျး အငျတာဗြူးဗီဒီယိုတှမှော ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး မိတျဆကျပေးထားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ တှဆေုံ့ကွုံကှဲခွငျးက လူ့သဘာဝမို့ ပိုပိုတဈယောကျ အနုပညာအလုပျတှမှော ပိုမိုအခြိနျပေးဖွဈတော့မယျလို့ အကောငျးဘကျကနေ တှေးတောရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
Source: ဝတျ ရညျ မိုး ‘s fb